7 dhacdo oo ay mudantahay in dib loo xasuusto kahor kulanka El Clasico | TOP NEWS
7 dhacdo oo ay mudantahay in dib loo xasuusto kahor kulanka El Clasico
By Mohamed Abdulle Hassan on April 21, 2017 No Comment
Axada soo socota waa maalin mudan in qof walboo oo ciyaaraha ama Kubadda cagta jecel uu isha ku haayo, maxaa yeelay waxaa is wajahaya 2 kamid ah naadiyada Kubadda cagta ugu waaweyn uguna xifaaltanka badan, kuwaasoo kala Ah Barcelona & Real Madrid.
Kulanka Axada ayaa go’aamin doona in Horyaalka La Liga uu yahay mid wali furan iyo in Real Madrid ay tahay mida ugu cadcad ku guuleeysigiisa hadii ay Barcelona garaacdo.
Hadii ay Axada Real guuleeysato waxeey la micno tahay ineey 6 dhibcood ka sareyso Barcelona sidoo kale Real ayaa wali gacanta ku haysata Kulan u baaqday.
Hadaba waxaan halkaan idinkugu soo gudbin doonaa 7 dhacdo oo mudan inaan dib u xasuusano kuna saabsan Kullamadii horey usoo dhexmaray labadaan kooxood.
Real Madrid 8 Barcelona 2 – La Liga, February 3, 1935
Waxeey ahayd Guushii ugu weyneyd ee ay Real ka gaarto dhigooda Barcelona waxaana xiligaa Real sadaexleey u dhaliyay xidigoodi hore Jaime Lazcano, sidoo kale waxaa shabaqa Barcelona soo taabtay Luis Regueiro.
Real Madrid 5 Barcelona 5 – La Liga, January 10, 1943
Kulankan ayaa ahaa mid ah labada naadi isku garab dhaceen iyagoo iska dhaliyay miin 5 Gool.
Barcelona 5 Real Madrid 0 – La Liga, 8 January, 1994
Waxeey ahayd xiligii ay Barcelona hogaaminayeen Johan Cruyff,Romario iyo Ronald Koeman.
2 kamid ah Goolasha Barcelona waxaa u saxiixay xidigii hore ee reer Brazil Romario, sidoo kale waxaa Fre Kick cajiib ahaa Real Ka dhaliyay Koeman.
Real Madrid 5 Barcelona 0 – La Liga, 7 January, 1995
Kulankaan waxa uu xasuus gaar ah u ahaa xidigii hore ee reer Chile Ivan Zamorano, kaasoo haafkii hore ee ciyaarta sadexleey ka dhaliyay Barcelona. Sidoo kale waxaa BARCELONA Gool ka dhaliyay macalinkooda hada leyliya Luis Enrique kaasoo markaas u ciyaarayay Real Madrid.
Kulankaan waxa uu xasuus gaar ah u yahay Lionel Messi iyo Ruud Vaan Nistelrooy, kuwaasoo miid 2 Gool ka dhaliyay, sidoo kale waxaa Real Goolka sadexaad u dhaliyay Sergio RAMOS.
Real Madrid 2 Barcelona 6 – La Liga, May 2, 2009
Kulankan oo ahaa mid si weyn loo bahdilay Real ayaa waxaa Goolka la hormaray isla Real waxaana u saxiixay Gonzalo Higuain, balse Thierry Henry iyo Messi ayaa mid walbo miin 2 Gool oo degdeg ahaa ka dhaliyay Real Madrid kahor intii aysan kusoo qatimin Gerrard Pique iyo kabtankoodi hore Puyol halka Goolka 2-aadna uu Real u dhaliyay Ramos.
Real Madrid 3 Barcelona 4 – La Liga, March 23, 2014
Messi ayaa markale sadex mar soo taabtay shabaqa Real Madrid, balse Iniesta ayaa ahaa midka Goolka 1-aad u daah furay Barca waxaase si degdeg ah ugu jawaabay Benzema oo Goolka Barbaraha u dhaliyay Real MADRID.
Messi ayaa kulankaan ka dhaliyay 2 Rigooro iyo Free Kick.
7 dhacdo oo ay mudantahay in dib loo xasuusto kahor kulanka El Clasico added by Mohamed Abdulle Hassan on April 21, 2017